Namana vaovao? - Namana Serasera.org
Eto ianao : Fandraisana > Fanoroana > Namana vaovao?
Mahafaly ahy ny manolotra ho anareo, indrindra ho an'ireo namana vaovao, torohevitra vitsivitsy mety hahatsara ny fampiasana ity namana serasera ity.
- Fitadiavana namana : Raha tianareo hahomby ny fitadiavana izay namana hifaneraserana dia ampiasao ilay hoe Hitady namana etsy ankavia etsy. Mariho ny toerana, ny salan-taona sns. Dia avy eo jereo ny momba azy raha misy, dia andefaso hafatra avy eo. Misy hoe "Andefaso hafatra" ao amin'ny mombamomba azy dia iny fotsiny no tsindrina.
- Tandremo ny manome email : Efa misy fomba fifandraisana mahaleo tena eto amin'ny takelaka namana serasera. Misy an'ilay hoe Hanoratra hafatra, na hoe Andefaso hafatra, dia mahazo hafatra tahaka ity alefako ity ilay namana. Tsy ilaina noho izany ny fanomezana adiresy email, indrindra raha adiresy email manokana izay tsy tianao ho hitan'ny olona hafa. Misy manko ny olona mpanangona adiresy email handefasana dokam-barotra, na hanaparitahana virus. Izany akory tsy milaza hoe olon-dratsy daholo ireo mangataka adiresy email. Anjaranao izany no mandanjalanja.
- Fenoy ny mombamomba anao : Anisan'ny jeren'ny namana voalohany dia ny mombamomba anao. Raha toa ka feno ny mombamomba anao ary mifanaraka amin'izay zavatra tadiaviny dia ho tsara ny fifandraisana. Mandehana ary etsy ankavia etsy amin'ilay hoe "Ny momba anao" dia fenoy.
- Mampidira sary : Farany, anisan'ny mahamora ny fifandraisana ny mahita ny endriky ny olona ifandraisana. Koa aza misalasala mampiditra sary. Raha toa ka tsy tianao ho hitan'ny rehetra ny sary fa ho an'ny namanao manokana ihany dia mampidira sary ho an'ny namana manokana.